Izici ezithakazelisayo ze-TOS Google App Navigator
Isixazululo se-iPhone esingekho JailBreak
Ikhaya Blogs Izici ezithakazelisayo ze-TOS Google App Navigator
January 17, 2015 Karen JosephBlogs, Okubalulekile kwe-TheOneSpy
Enye ye-Android yakamuva ye-Android cell phone tracker navigation lokusebenza ekhishwe i-TheOneSpy yiyona I-TOS Android App Navigator. I-TheOneSpy i uhlelo lokuqapha kwabazali okungasetshenziswa abazali ukugcina ithrekhi yezingane zabo nokuqapha imisebenzi yabo. Ivumela abazali ukuba bangabhalisi kuphela izingcingo ezenziwe izingane zabo kanye nalabo abatholwa yibo; Ibuye ibanike ithuba lokuvimbela noma yiliphi inombolo abazwa ukuthi akufanele baxhumane nengane yabo. Ngaphezu kwalokho, isofthiwe ye-spy ye-Android yezingane iphinde inike abazali ngokusebenzisa isofthiwe amandla okurekhoda imiyalezo etholakele noma ithunyelwe efonini. Indlela i- Uhlelo lokusebenza lwe-TOS Android Navigator kusiza ukuthi noma yimuphi umsebenzisi obhalisiwe weTheOneSpy angakwazi landa lolu hlelo lokusebenza lwamahhala kusuka ku-Amazon AppStore for Android futhi khulula TOS iPhone spy lokusebenza navigator for iPhone okuyinto ideshibhodi yabo bonke izici zokuqapha ezinikezwa i-TOS. Bonke abasebenzisi ababhalisiwe bazovunyelwa ukuhamba ngalezi zici futhi babe nokufinyelela kukho konke okuqoshiwe ngaphandle kokunye ngena ngemvume ku-THEONESPY Iwebhusayithi.
Umsebenzi we-intanethi uyanda phakathi kwezingane, ikakhulukazi kuma-Smartphone futhi okunye okuyizihloli zesoftware ze-TOS. Abazali bangafinyelela noma yikuphi amawebhusayithi avakashelwe yizingane zabo futhi baze bavimbele nanoma yikuphi okuzizwa bengakufanele ukubhekwa uma nje basebenzisa le software.
Ngaphandle kwalezi zici, lokhu isofthiwe ye-Android yokuqapha izingane mahhala ibuye ivumele abazali ukuba bagcine isheke kumafayela e-multimedia angagcinwa efonini. Izithombe namavidiyo angathathwa efonini, alandiwe kusuka ku-intanethi, alayishwe ku-intanethi noma aphinde atholwe ngumuntu wesithathu angabonwa konke esebenzisa le software, ngaleyo ndlela enikeza abazali umqondo ongcono wezinhlobo zamafayela izingane zabo ezibukekayo .
Izingodo zekholi nokuqoshwa kungatholakala kubazali besebenzisa isofthiwe ye-Android ye-navigation ye-TOS. Ngokuhambisana nalokhu, bangayisebenzisa futhi ukugcina ithrekhi ekukhoneni kwengane yabo. Ngokulandela ifoni ngaso sonke isikhathi, bangase bafike wazi indawo yengane yabo ngokusebenzisa i-GPS ngenxa yokuthi isofthiwe ibhekwa phakathi kwesofthiwe engcono kakhulu ye-spy software yezingane. With zakamuva zayo I-Google App Navigator futhi I-Apple Appstore Navigator, I-TOS inomkhawulo owengeziwe ngoba ingavumela noma yikuphi umsebenzisi obhalisiwe ukuba aqaphe konke okuvela kugajethi yakhe futhi abe nokufinyelela kukho konke okwenzeka ngaphandle kokudinga i-laptops yabo.
Uhlelo lokusebenza lwe-TheOneSpy TOS lwe-Android ne-iPhone lokusebenza i-Navigator yi-dashboard yohlelo lokuqapha abazali ekulawuleni kude nezingane zefoni nokuqapha imisebenzi yabasebenzi.
Tags: Android spy, uhlelo lokusebenza, khulula, google, ukuqapha, isofthiwe
U-Karen Joseph ungumlobi wokuqukethwe wezobuchwepheshe ku-Blog ye-TheOneSpy kusukela eminyakeni engu-4 edlule. Unesithakazelo ngokusiza abazali abangewona ochwepheshe be-savvy nabanikazi bamabhizinisi kuzo zonke izici zokuphepha kwe-cyber nokukhulisa idijithali. Ngaphandle kokubhalela ibhulogi ye-TOS, uKaren uphinde unikeze i-SEO yezobuchwepheshe kanye ne-copywriting ye-TheOneSpy brand.
Okuthunyelwe kwangaphambilini Khulisa ukuthumelelana imiyalezo ngaphakathi kwentsha Okuthunyelwe okulandelayo Iyini i-TheOneSpy Android Phone Tracker
Ungathinta kanjani Izingcingo zefoni ngeTheOneSpy ku-Android? (ngaphandle kokuqothula)
Ukuhlaselwa Okuhlaselwa Kwama-Ransomware Okumangalisayo: Ukuphepha Kwezwe Kuye Kwawa
Kwangathi 16, 2017 Karen Joseph
Izingozi ze-5 Online nezindlela Zokuvikela Intsha Yakho - Yenza I-Digital Monitoring Sure
Ukukhulisa i-Digital (170)
Ukuqapha abasebenzi (58)
Okubalulekile kwe-TheOneSpy (102)
Ukulimaza Akusho Ukuthi U-E-cigarette "Kulungile" Kwabaningi: I-TheOneSpy
Ingabe Ukuqapha Kwendawo Yomsebenzi Umsebenzi Oyingcolile?
Imfihlo Yengane Yentsha Yama-Instagram ("Rinsta" ne "Finsta")
I-TheOneSpy Spy Software Yokuqapha i-Samsung Galaxy S10
Intsha Yokuhlukunyezwa Ngokweqile Kwi-Virtual World (Izibalo Zezinhlolovo)
Izici ezinhle zokubeletha
I-Facebook Chat Tracker
I-Skype Messaging Tracker
Hike Message Tracker
Izinhlelo zokusebenza ze-OS zokuhambisana ezihambisanayo
I-Android Parental Software
Isofthiwe ye-Mac OS Monitoring
I-Windows Monitoring Software
Inqubomgomo yokukhokha nokubuyiselwa kwemali
Isofthiwe ye-TheOneSpy ithuthukiswe ukuze isebenze ngenhloso yokuqondiswa kokuziphatha kwabazali abafisa ukuqondisa imisebenzi yamagceke abo angaphansi noma abaqashi abafisa ukuqondisa umsebenzi wabo-basebenzi, kodwa uma beveza, imvume yephepheni. Umthengi we-TheOneSpy Isicelo kumele abe ngumnikazi weselula noma abe nemvume ye-ephepheni evela kumagcedi abo noma abasebenzi abanikeza igunya lokuphatha imisebenzi yabo ngaphambi kokuba bakwazi ukufaka, ukulanda noma ukunika amandla isofthiwe ye-TheOneSpy Monitoring umakhalekhukhwini othile. Isevisi ye-TheOneSpy akufanele isetshenziswe njengendlela yokuhlola noma yokugxuma noma ubani. Isofthiwe ye-TheOneSpy akufanele ilandelwe ukuqapha umakhalekhukhwini nganoma yimuphi omunye umuntu kumbuthano womphakathi wokugcina, kubandakanya nezingane zabo eminyakeni engaphezu kwe-18 ngaphandle kwemvume yabo evulekile, ephepheni.
I-Copyright © 2014-2019 I-TheOneSpy, uphawu lokuhweba olubhalisiwe lwe-Respective Company, Wonke amalungelo agodliwe.